Mkpụrụ osisi Zarnitsa: nkọwa nke ụdị dị iche iche na njiri na nyocha, ọkachasị ihe ọkụkụ na itolite, foto - Osisi - 2020
Ìhè n'aka ndị mmadụ: gbasara mkpụrụ osisi Zarnitsa dị iche iche
Ọtụtụ ndị na-akụ mmanya na ndị na-elekọta ubi nụrụ banyere ụdị mkpụrụ vaịn a. Ọ dị ezigbo mma ma n'ọdịdị dị arọ, na mmanụ a theụ nke uto a mịrị amị nke tomato, yana enweghị nsogbu nke nsogbu na-eto eto.
Onye wụsara Zarnitsa ahụ
Dị ka àmụ̀mà, na-enwupụta mbara igwe Ọgọstụ abalị, mkpụrụ vaịn nke Zarnitsa na-ewe ifịkị na tomato n'etiti ọnwa. Ejiri “ọkụ” maka oge mbụ na Novocherkassk na 1995 n'ihi ọrụ nhọpụta nke onye na-amu amu Viktor Nikolayevich Krainov.
Onye Okike nke Zarnitsa dị iche iche
N'ihi na o toro n'apịtị mmiri dị larịị, mkpụrụ vaịn dị mkpa nke na-agaghị agbaji ma ọ bụ na-ere ere n'ọnọdụ ndị a. Ndị nne na nna nke ụmụ amaala ya họọrọ ụdị Kishmish na Talisman. Nke mbụ n'ime ha - nna nke Zarnitsa - nwere ezigbo uto, n'agbanyeghị na ọ bụ ihe ọchị. Nke sitere na Talisman di iche-iche sitere na nne di, nke nwere ike imeghari dika onodu na-eto eto, nke na adighi agha onwe ya ire ere.
Ada nke Talisman na Kishmish
Ihe nkpuru nkpuru osisi grape di iche a nwetara site na agafe ka ana akpo Zarnitsa ma obu Arkadia n’oge, ebe obu na ebua izu abuo mbu tupu udiri udiri arcadia.
Bushes nke nkpuru vaịn a nwere ikike uto di uku. Okooko osisi nke Zarnitsa na-enwe nwoke na nwanyị na ndi nwere ntozu oke.
Cyọkọ ọkara dị ukwuu nke mbido Arcadia, na-agbacha, nweta ọla edo, nke amba na-acha odo odo, nwere ọdịdị na-atọ ụtọ. Ọ fọrọ nke nta ka ha enweghị peas. Mgbe ha na-ebugharị, ha na-ejigide ngosi ha na uto ha nke ọma.
Mkpụrụ buru ibu nke Zarnitsa dị ka akwa ma ọ bụ oval nke nwere nnukwu ihe ọ juụ juụ na-adọrọ adọrọ. Ọ na-atọ ụtọ nke ukwuu na acidity na-enweghị nke hụrụ.
Nnukwu tomato Zarnitsa n'ụdị akwa ma ọ bụ oval nwere okpo mmiri dị ụtọ
N’ezie, nha nke tomato na uto nke mkpụrụ ya na-adabere n’ebe mkpụrụ vaịn na-eto ma na-elekọta ya nke ọma.
Nkọwa banyere Zarnitsa dị iche iche
Zarnitsa, dịka iwu, tozuru oke n'etiti August - 110-115 ụbọchị site na akụrụ ahụ malitere imepe. N'oge a, ịdị arọ nke ụyọkọ ya nwere ike iru 0.7-1.5 n'arọ, na ịdị arọ nke tomato - 8-10 grams nwere nha nke 28x23 mm. Ọgwụ shuga dị na mkpụrụ osisi si na 16 ruo 18%.
Ụyọkọ mkpụrụ osisi
Oge mbu Arcadia adighi atu egwu frosts to -23 ºС. Ọ bụ nnọọ eguzogide isi awọ ire ere na mildew. Ihe mgbochi Oidium bụ nkezi. Ndi okacha mara nchoputa nke iguzogide oria di iche-iche na isi 3-3.5. Ikebịghike, Zarnitsa tomato mebiri wasps. Varietydị dị iche iche nwere nnukwu mkpụrụ akwụ. Otu ohia Zarnitsy nwere ike ịmị mkpụrụ 6g nke mkpụrụ.
Zarnitsa ga-ekele maka nlekọta ahụ
Mkpụrụ osisi greepu Zarnitsa na ohia
Ọ bụ ezie na n’ozuzu Zarnitsa dị iche iche adịghị akọwa, ọ na-eme ka ihe ọkụkụ buru ibu ma ka mma site na iji akọ na nlezianya na-akụ.
N'agbanyeghị nzere ntu oyi nke ọtụtụ, onye na-anwụ anwụ anaghị anwụ na -23 ºС, Zarnitsa anaghị enwe mmasị na draịvụ, ma ọ bụghị ya meghere buds ka nwere ike ifriizi. Ma ndo maka oge oyi agaghị abụ oke.
N'oge ọkọride, a ga-agba mkpụrụ vaịn mmiri mgbe niile. Atọ na-amalite n'oge mmeghe nke buds, na n'oge okooko na guzobe nke ụmụ nwanyị, a na-amụba ugboro ole ha.
Zarnitsa bụ mkpụrụ vaịn siri ike, ya mere, iji nweta ezigbo owuwe ihe ubi n'oge ọkọchị, ha na-efopụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Na mgbakwunye, a na-eme ka nhazi iwu, na-ahapụ ihe karịrị atọ ụyọkọ na alaka fruiting.
Ome na Arcadia n'oge chara nke ọma. Na-abụkarị ihe na-erughị otu ụzọ n’ụzọ atọ nke nke ọ bụla n’ime ha na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. N’oge mgbụsị akwụkwọ, ome 22-24 nwere ike ịdịgide n’osisi ahụ, a na-egbute osisi vaịn maka anya 8-10, na-ahapụ mkpụrụ 30-35 na ohia.
Zarnitsa di iche-iche bu site na ogwu na ogwu. Methodszọ abụọ ahụ dị irè. Ome ndị ahụ na-anya ọkụ na-agbanye mkpọrọgwụ nke ọma ma na-eto ngwa ngwa, na chubuki na-agbanye ngwa ngwa.
Nyocha nke ndị na-ere mmanya banyere Zarnitsa
Onye ọ bụla na-ahọrọ ihe ọ hụrụ, nọrọ n'ụlọ ma ọ bụ ebe ọzọ. Mana amaara m ọnọdụ nke mpaghara nke m; anyị na nwunye m hapụrụ na July - Incense 2, Raisin, Valek, Nadezhda Rannaya, Jupiter ... N'otu oge ahụ, ọ na - ekwu ihe kachasị atọ ụtọ. Daysbọchị iri gafere Rosmus, Rochefort, Veles, Laura, ... Libya ... Emume ncheta Novocherkassk, Gourmet Early, Ksenia - izu ọzọ Sofia, Dashun, Kodryanka, Frumoasa Albe, Rafinad, Ruslan, agụmakwụkwọ na ọzọ ihe kachasị ụtọ. N'izu ọzọ, Buffet, Bazhen, Dozen, Zarnitsa, Blagovest, Volodar ... na Anuta, Centennial, Ninel, Svilena, Nadezhda Azos, Aramis, rutere n'oge mgbụsị akwụkwọ ọzọ ... kacha atọ ụtọ. Taa, anyị na-anọdụ, wepụtara si na okpuru ulo Red Globe, Nnukwu ọzọ m na-anụ ihe kacha atọ ụtọ. Ikwu na nke ahụ abụghị eziokwu? Eziokwu, mana kedu maka oge ọ bụla .Ọ nwere ike ịta, ilu dabara na nri abalị. Na mgbe ahụ eziokwu yiri.
Kụrụ ahịhịa Zarnitsa nke nwere osisi n'afọ 2008 na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Enwere m ike maka ike na nkwụsi ike masịrị m (ọ bụghị ọnụọgụ mildew n'agbanyeghị na afọ ahụ na-egbu mgbu). Ma n’August, ana m elele ubi vaịn nke isi iyi nke seedling: N’ime afọ abụọ gbara mkpulu mita anọ na anọ ruo asaa, enwere mgbama nke 700 grams !!! Enwere m mmasị na uto nke beri: nkwekọ, anụ ahụ bụ ude. Ana m atụ anya maka owuwe ihe ubi mbụ! Nke a bụ foto nke nwere nkọwa na foto m site na ekwentị
M tolitere abụọ abụọ dị iche iche na Zarnits ma ha abụọ na-etolite ngwa ngwa. Nke mbụ yiri nke a na-echere Ogologo oge, mana beri bụ odo na uto ahụ dị ntakịrị, anụ ahụ denser na ọdịdị nke ụyọkọ ahụ dị iche na Ogologo oge a na-echere. Nke abụọ yiri ntụgharị, mana naanị edo edo. M were ya, Dị ka Aksinya, mana ọ tụgharịrị na Zarnitsa na m chọrọ inweta. Dị ka Krainov kwuru na fim ikpeazụ nke Livarenko sere.
Zarnitsa bụ ọmarịcha okpokoro mkpụrụ vaịn na-enweghị nsogbu. Mana ọ ga-ekele maka iwere ihe ubi zuru oke maka naanị ọrụ, nlebara anya na nlebara anya o tinyegoro.